Xeeladaha VfxAlert ee bilowga ah | vfxAlert official blog
Furitaanka heshiis lala yeesho calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah waa habka ugu fudud ee bilowgu u helo lacag ganacsi. Laakiin, ka dib dhowr calaamadood oo aan faa'iido lahayn oo isku xigta, su'aasha ayaa soo ifbaxaya - iyadoo loo eegayo xeelado noocee ah ayuu adeegga u shaqeeyaa? Qofna ma bixin karo 100% calaamado faa'iido leh, isagoo og sida loo abuuro, waxaad si weyn u yareyn kartaa khasaaraha.
Nasiib darrose, inta badan adeegyada calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ah waxay u shaqeeyaan sidii "sanduuqa madow": qiimo cusub oo hanti ah ayaa laga soo galaa irridda laga galo, waxaanan helnaa talo soo jeedin ah in la furo CALL ama PUT-option oo ah meesha laga baxo Sida go'aanka loo gaaro lama oga. Sida had iyo jeer, waxaa jira waxyaabo ka reeban xeerarka; mid ka mid ah waa adeegga vfxAlert, oo daabaca shuruudaha ugu muhiimsan ee istiraatiijiyaddiisa.
Faahfaahinta waxa tilmaamayaasha la isticmaalo waxaa laga akhrisan karaa goobta . Halkan waxaa ku yaal oo keliya macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan noocyada istiraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo waxtar u leh akhristayaasha hadda bilaabaya inay bartaan falanqaynta suuqa farsamada iyo shumaca:
Istaraatijiyad isbeddel ah
Aynu ku bilowno qeexitaanka. Marka, isbeddelku waa dhaqdhaqaaq jihada ah ee qiimaha hantida ganacsiga (labada lamaane, keydka, mustaqbalka) muddo cayiman. Waxaa jira saddex nooc oo isbeddel ah:
Uptrend (bullish) - waxay muujineysaa kororka qiimaha hantida. Jaantuska, wuxuu umuuqdaa taxano qiimo hoose ah, oo midkastaaba kabaxo kii hore.
Downtrend (bearish) - waxay muujineysaa hoos u dhaca qiimaha. Jaantuska, waxay umuuqataa taxane ah oo si isdaba-joog ah hoos ugu dhacaya sicirka;
Majiro wax isbeddel ah (qaab fidsan, dhinac dhinac ah, isugeyn) - isbeddellada sicirka ee cabiraado cidhiidhi ama ballaadhan leh. Jaantuska, wuxuu umuuqdaa taxane sare iyo hoos udhac ah oo isku heer ah.
Ganacsiga isbeddelka, iyo sidoo kale calaamadaha ganacsiga nool ee u dhigma, ayaa loo tixgeliyaa kuwa ugu kalsoonida badan uguna faa'iidada badan. Newbie waxaa lagula talinayaa inay bilawdo ganacsiga istiraatiijiyadda isbeddelka.
Tilmaamaha farsamo ee ugu muhiimsan ee lagu ogaanayo isbedelka, labadaba calaamadaha lacag bixinta iyo kuwa bilaashka ah , waa Celceliska Dhaqdhaqaaqa (MA): haddii lagu jiheeyo hantida kor u kacda, hoos u dhaca hoos u dhaca iyo qotada dheer. Si loo xaqiijiyo sii socoshada, dhamaadka, iyo maqnaanshaha isbeddelka, dhowr MA oo leh kala duwanaansho kala duwan iyo tiro muddooyin ah ayaa loo isticmaalaa, sida ku xusan tilmaame Alligator.
Sida aad ka arki karto tusaalooyinka, qof walbana wuu arki karaa tan adoo fiirinaya jaantuska, sicirka badanaa wuxuu raacaa isbeddelka noocyo cayiman oo leh dib u celin yar iyo soo bixitaanka cusub ee max / min. Haddii aad xarriiq u yeelatid ugu yaraan laba ka mid ah, waxaan helnaa xariijin iska caabin ah iyo khad taageero ah oo xaddidaya kala duwanaanta qiimaha is bedbeddelka. Inta badan si sax ah, tan waxaa lagu sameyn karaa oo keliya gacanta, laakiin hadda software-ka calaamadaha ugu fiican ayaa si sax ah u sameeya.
Markuu qiimuhu riixo khadadka taageerada / iska caabinta, istiraatiijiyaddu waxay ku fureysaa ikhtiyaar dhicitaan heerka khadka ka soo horjeedka ah (eeg sawirka kore). Sidan ayaad ku furi kartaa dhowr ikhtiyaar ka hor intaan isbeddelku dhammaan oo kor u qaadin faa'iidadaada.
Ikhtiyaar kale wuxuu noqon karaa in la furo hal ikhtiyaar oo leh dhicitaan dheer oo jihada dhaqdhaqaaqa weyn. Istaraatiijiyaddani waxay ku habboon tahay ganacsiga gacanta oo uma baahna istiraatiijiyad otomaatig ah ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah .
Muhiim: xitaa haddii ganacsiga lagu sameeyo iyada oo loo marayo bixiyaha ugu fiican ee bixiya , waxaa lagugula talinayaa inaad fiiriso isbeddellada isbeddellada ku yimaada mugga suuqa (xitaa xaddiga sax). Badanaa waxay bixiyaan calaamadaha hogaaminta.
Istaraatiijiyadda dib u celinta
Isbeddellada, xitaa kuwa dhexdhexaadka ah - iyo kuwa muddada-dheer, had iyo jeer waa dhammaadaan: ilaha "dibiyada" iyo "orso" kuma filna inay kor u qaadaan qiimaha (si xad dhaaf ah) ama hoos u dhaca (xad dhaaf). Sababta kale ee loo joojinayo waxay noqon kartaa daabacaadda wararka aasaasiga ah ee aasaasiga ah iyo tirakoobka, gaar ahaan isbeddellada xilliga gudaha.
Dib u noqoshada suuqa ayaa si dhakhso ah ugu dhici karta baararka qiimaha 3-5 ama ka dib muddo xoojinta. Istaraatiijiyadda dib u noqoshada waxay ku siinaysaa calaamado ka yar kan soo socda. Sida dhaqanku muujiyey, iyagu waa kuwo la isku halleyn karo maaddaama ay jirto ixtimaal sare oo ah furitaanka ikhtiyaarka bilowga hore ee isbeddel cusub, oo aan ahayn dhammaadka dhaqdhaqaaqa markii ugu badnaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah s been noqdo.
Dib udhac: isbadal dheer kadib, oscillators xad dhaaf ah / xad dhaaf ah sida RSI iyo Stochastic ayaa "cagta marinkara" mudo dheer meelaha muhiimka ah ama kudhow heerka 50 iyadoon laga gudbin. Istaraatiijiyaddu ma bixineyso calaamad, inkasta oo dib-u-celinta ay bilaabatay. Had iyo jeer fiiri jaantuska haddii dib u noqoshada ay si cad u muuqato, gaar ahaan ka dib qaababka shumaca "Doji" ama "Pin-bar", waxaad isku dayi kartaa inaad ikhtiyaar ku furto dhicitaankiisa oo kordhay.
Istaraatiijiyad la qabsi
Adaptive waa algorithm ama nidaam si otomaatig ah u beddelaya shaqadiisa ama qaab-dhismeedkiisa si loo gaaro natiijo wanaagsan marka xaaladaha dibadda ay is beddelaan. Tusaale ahaan, qofku wuxuu ku kala duwan yahay dabeecaddiisa iyo ficilkiisa taas oo ku xidhan deegaanka iyo waaya-aragnimadiisii hore.
Hababka tirakoobka ee lagu lafagurayo xogta taariikhiga ah ayaa la adeegsadaa. Hadday tahay labada istiraatiijiyadood ee hore, calaamaddu waxay u muuqataa oo keliya marka qiimaha tilmaamuhu uu buuxiyo shuruudaha la siiyay, markaa algorithm-ka la-qabsiga wuxuu u shaqeeyaa si ka duwan sidii hore. Waxaa loo maleynayaa in baarkasta qiimaha taariikhi ah ay jiri doonaan calaamado ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaar leh waqti dhicitaan oo la siiyay (5, 10 daqiiqo iwm). Kadibna xogta laga helayo tilmaamayaasha ayaa lagu darayaa, waxaan eegeynaa natiijada dhicitaanka - mid togan ama mid taban. Isku-darka xog kasta waxaa lagu kaydiyaa keyd (ugu yaraan 2000 signaal) si loogu barbardhigo suuqa hadda jira.
Marka, istiraatiijiyadda la-qabsiga ayaa si otomaatig ah loo hagaajiyaa, waxay si sax ah u go'aamin kartaa suurtagalnimada natiijo wax ku ool ah, taas oo macnaheedu yahay "xoogga" calaamadda iyo daqiiqadda ikhtiyaarka la furay.
Talooyin ku saabsan istiraatiijiyadda isticmaalka
Calaamadaha wax calaamadaha binary software ma noqon karaan qodobka kaliya ee lagu furo heshiis. Kuwani waa uun talooyin; had iyo jeer ka raadi xaqiijin dheeraad ah tilmaamayaasha farsamada iyo qaababka gorfaynta garaafka. Haddii ay jiraan khilaafaad muuqda, waxaa fiican in laga boodo calaamadda!
Jihada ka sokow, waxaan had iyo jeer eegnaa laba calaamadood oo waaweyn oo dheeraad ah :
Awood. Waxaa laga xisaabiyaa xogta taariikhiga ah waxayna u taagan tahay boqolkiiba fursadaha faa'iidada leh ee isku dhafan tilmaamayaasha.
Heatmap. Boqolleyda la filayo ee guuleysiga. Waxaa lagu go'aamiyaa tirakoob iyo waqtiyo kale.
Nooca Pro wuxuu leeyahay shaandheeye loogu talagalay hantida ganacsiga iyo qiyamka Awoodda. Calaamadaha binary ee bilaashka ah macquul maaha!
Waad ku horumarin kartaa natiijooyinka adoo falanqeynaya waqtiyo badan oo isku mar ah. In badan oo "dheer" M5-M15 ah ayaa bixin kara calaamado qarsoon oo ku saabsan isbeddelka isbeddelka, kaas oo markaa lagu xaqiijinayo heshiiska M1.
On isbeddel xoog leh iyo xaqiijinta adeegga calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah , waxaad furi kartaa heshiisyo dhowr ah oo leh dhicitaan kala duwan si aad u soo qaadato dhaqdhaqaaqa ugu sarreeya khatarta ugu yar. Haddii dallaalku fursad u siiyo inuu xiro ikhtiyaarka illaa uu ka dhacayo, markaa hubaal waxaan hagaajineynaa macaamilka (xitaa haddii faa'iido tahay!) Soo bixitaanka calaamadda ka soo horjeedda!
Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa kalandarka dhaqaale ee lagu soo daray dhammaan meheradda ganacsiga binary ee caanka ah !
Aynu soo koobeyno : dhammaan saddexda nooc ee astaamaha binary auto waxay bixiyaan soocelin isdaba joog ah marka si habboon loo isticmaalo. Dhammaan waxay kuxirantahay yoolalkaaga iyo qaabka ganacsiga. Muddo-gaaban (3-5 daqiiqo) kaydadka waqtiga M1 ah (scalping), istiraatiijiyad la-qabsi ayaa si fiican u shaqeysa. Qiimuhu had iyo jeer wuu furmayaa iyo xeeladaha "classic" waxay bixiyaan calaamado been ah, ma jiro waqti falanqeyn dhammaystiran, waxaad u baahan tahay inaad si dhakhso leh u furto heshiisyo. Tirakoobka la-qabsiga ee natiijooyinka ayaa kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh u qiimeyso xaaladda oo aad u kala saarto buuqa "suuqa".
Haddii aad doorbideyso ganacsi "xasilloon" ka badan, dooro isbeddellada ganacsiga ama beddelka calaamadaha ganacsiga ee M5-M15 waqtiyada ay dhacayaan oo dhacayo 20-25 daqiiqo.